Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Tsy Taolagnaro i Madagasikara
Mirehaka aoka izany ny orin’asa mpandroba ny harem-pirenena “fasimainty” any Taolagnaro, dia ny QMM izany, satria hoe tsy maintsy hifampiraharahana indray amin’ny mpitondra fanjakana ny tetik’asa Qmm. Ny mpitondra fanjakana amin’io, mihanahana toa ganagana, sanatriavin’ny vava, satria tsy manan-kalahatra.
Raha nanaovan’ny olona tsara sitra-po sy tia tanindrazana rehetra fanamarihana ny hoe “famelana ny hafa handroba ny harem-pirenena no dikan’ny hoe 1% amin’ny sandan’ny fasimainty voatrandraky ny QMM ihany no arotsany ao amin’ny kitapom-panjakana… ka rariny sy hitsiny raha havaozina io fifanarahana io…” dia manamarin-tena ny QMM tamin’ny alalan’ny tale jeneraliny David Alexandre Tremblay, ary tsy mihetsi-bolo-maso mihitsy.
Tetik’asa 40 taona no nifanarahana, hoy izy, ka tokony ady hevitra amin’ny fampihenana ny haba arotsaky ny QMM ao amin’ny kitapom-panjakana no hatao. Izany hoe tokony mbola hihena ho 0, 5% izany angamba, ilay 1%. Dia notanisainy avokoa ireo fandemen-tsaina isan-karazany, toy ny hoe “1.000 tapitrisa dolara ny vola ampiasain’ny QMM ao ary asa mivantana 2.000 sy asa tsy mivantana 11.000, izany hoe ny 98%-n’ny mpiasa ao dia malagasy no aterak’izy io”.
Dia nambara koa fa manokam-bola 2.500.000 dolara isa-taona no atokan’ny QMM hiarovana ny tontolo iainana, ka mamboly zanakazo 400.000 isa-taona. Mahatratra 25.000 dolara koa, hoy ity tale jeneraly, ny sandan’ny fampitaovana sy fametrahana ny kojakoja ahazoana herin’aratra avy amin’ny masoandro ho an’i Taolagnaro. Dia tanisainy koa ny tetik’asa famokarana herin’aratra any an-toerana ho an’io asa fandrobana harena ataon’ny QMM io…
Izany avy no enti-manasa ny ati-dohan’ny Malagasy… dia mety ho resy lahatra ny fitondram-panjakana.
Averinay hatrany fa “tsy Taolagnaro no Madagasikara”. Ny dikan’izany aminay, na iray manao toa io zavatra ataony io manerana ny Nosy ny QMM dia azo ambara ihany fa tena mikatsaka ny tombontsoan’i Madagasikara… na tsy ny tena marina aza no ataony amin’izany.
Averimberinay hatrany fa tsy rariny io 1% omen’ny QMM ho an’ny firenena Malagasy amin’ny harena voatrandraka ao sy aondrany any ampita io. Izahay dia mbola manitrikitrika hatrany fa mbola endri-pandrobana ny firenena Malagasy hatrany na ireo tarehi-marika voatanisan’ny tale jeneralin’ny QMM ireo. Mba tsy hifandroritana dia tsotra ny resaka, satria efa hifampiresaka sy hifandinika amin’ny fanjakana Malagasy ihany ny QMM. Akaro hatramin’ny 60% ny anjaran’ny firenena Malagasy avy amin’ny fasimainty trandrahin’ny Qmm ao Taolagnaro, dia tsy voatery manao an’ireo rehetra voatanisany ireo ny QMm. Na ny famoronana asa ho an’ny Malagasy ao aza, dia anjaran’ny firenena Malagasy ny mampiasa an’io 60% io amin’ny fikarakarana ny vahoaka manerana ny Nosy, ka tafiditra ao ny fampitomboana avo 1.000 heny amin’izay vitan’ny QMM any Taolagnaro. Anjaran’ny vahoaka Malagasy indray ny manara-maso ny fampiasan’ny fanjakana an’izay 60% avy amin’ny QMM izay.